यी शारीरिक र मानसिक कारणले महिलामा निम्त्याउँछ यौन समस्या - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ यौन स्वास्थ्य ∕ यी शारीरिक र मानसिक कारणले महिलामा निम्त्याउँछ यौन समस्या
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७७ भदौ २८ गते, १९:३९ मा प्रकाशित
सामान्यतयाः तुलनात्मक रुपमा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई यौन समस्याले बढि सताउने गर्छ । दाम्पत्य एवम् यौनजोडी बीच महत्वपूर्ण रहने यौनजीवनका कारण कुनै पनि महिलाले शारीरिक पिडाका साथै मानसिक पिडासम्म झेल्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन् सक्छ । महिलामा देखिने यस्तो समस्याका कारण महिलासँगै उनका यौन पार्टनरमा पनि यसको प्रभाव स्वतः पर्न जान्छ । जसले उनीहरुबीच मन-मुटाव समेत उत्पन्न गराउँछ ।
महिलामा के–कस्ता कारणले देखिन्छ यौन समस्या ?
मुख्यतयाः महिलामा देखिने यौन समस्याका विशेषगरी शारीरिक र मानसिक कारणहरु रहेका हुन्छन् । त्यस अन्र्तगत पनि कस्ता समस्याले यौन स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ भन्ने विशेष अर्थ राख्छ । महिलामा देखिने यौन समस्याको शारीरिक र मानसिक कारणहरु निम्न रहेका छन्ः
अल्कोहोल एवम् नशायुक्त औषधिको सेवन
केहि औषधिको सेवन ।
यौन प्रस्तुतीमा आवश्यकतभन्दा बढि केन्द्रित रहनाले
वैवाहिक एवम् प्रेम सम्बन्ध समसयाका कारण
र, विगतका केहि यौनसंग जोडिएका केहि घटनाहरु ।
महिलामा यौनसम्बन्धि समस्या देखा परेमा सर्वप्रथम त, के कारणले यस्ता समस्या देखाप¥यो? भन्ने कारणको पत्ता लगाउनुपर्छ । र, सोहि अनुसार समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । यससँगै यसले आफ्नो सम्बन्धमा नकरात्मक असर नगरोस् भन्नका निम्ति महिलाले यसबारे खुलस्त रुपमा आफ्नो पार्टनरलाई बताउनु पर्छ भने, एक–आपसको साझेदारीमा सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्श लिनु उचित रहन्छ ।
तर, शारीरिक समस्याका बारेमा आफ्ना पार्टनरलाई सजिलै बताउन सकेता पनि अधिकांश महिला मानसिक अवस्था र यसका कारणलाई आफ्नो पार्टनरसामु खोल्न चाहादैनन् । तसर्थ यसका लागि भने महिलाले स्वयम् आफै पनि गोप्य रुपमा सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह लिन सक्छिन् ।